Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe LeBron James na-eji? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Lebron james igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Lebron james igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe LeBron James na-eji?
Maka oge ọkọchị ikpeazụigwe kwụ otu ebe-a-thon, Cannondale wuru omenalaigwe kwụ otu ebemakaJamesdabere na ụdị Caffeine ya, ejiri okpokoro 29er na-ese na agba Cavs na-acha uhie uhie na ọla edo. Iheigwe kwụ otu ebena-eme egwuregwu egwuregwu Lefty fork na Si Hollowgram.
Lebron James Web LifeBiografieNet WorthLebron James Nrite
Ridgba ịnyịnya ígwè ọ dị mma maka ndị egwuregwu basketball?
Nkata bọọlụkwesịrị ịnọgide na-enwe magburu onwe isi ike. Ọ na-eme ha anyammama hụ na ha nwere ike ịrụmman'ụlọ ikpe.Cygba ígwèbụeziụzọ iji bulie ike.Eprel 26 2021
AKW AKWỌ vidiyo nke na-eme gburugburu na ntanetị nke nwere nnukwu ajụjụ. O bu nzuzu ma sie ike ile. Vidio a na-egosi obere nwa na-egwu bọọlụ na ụmụnwaanyị nwanyị abụọ na-akwọ ụgbọala, MA NKỌRỌ NA-AKW THEKWỌ NDL ỌHIESR TO, KWES ONER ONE KWES OFR G GM GAKA NWA, KWAA UNU IESMADAKA.FUCK I I will Pound You IN your ASS. N'ezie? SO HANY HA mmerɛw? ANYI AMAGHONE.ỌDONE NA-AD LKAR BO KA NWOKE NWA OKA NA-EWERE N’IHU IRMIRAKA.
NWA NWOFO, KWURU B BB SE AKA NA-AH U Nghọta. Nke a bụ ụgbọ oloko. Nwatakịrị ahụ dị ka ọ bụ naanị na-anwa SMOOTH. NWAANY J NA-EKWU KWES YOUR YOU YOU KWES SHER SHE KWES SHER A KWES SHER I NA MAGH WH MTA.
Nke a bụ ihe na-akpali mmasị na-eme ihe niile na mba ahụ, nke a nwetara ezigbo na Facebook ma anyị ekerịta oge 180,000. A H VR A YA IWU Ọtụtụ nde oge. O NWERE MILI 3.
Gịnị ka ihe ndị a na-ekwu banyere anyị? Vidio Na-eju Anya. IWU NA-AB WHA EBERE. OFFỌD OF NA-EGO, Ọ KPỌRỌ AKW THISKWỌ A.
NKE AKW ABKWỌ BANYERE 11,000 THUMBS. Ọzọ kwuru, 'M na-eche banyere ọnọdụ, ime ihe ike adịghị mma, DENKIS KWURU NA VNT VTA ỌJ ISỌ D IS MMA. N ’O B AR A NWAANY R AZA AHA G,, WILL̀ GA-EWEP HTA Ya? ”DONALD TRUMP NA-EBE Vidio A.
Enweghị m ike ịme ikpe n'ihi na CAMERA - M nwere ike 'ikwu ihe ọ na-eyi. Anyi ekwesighi ikwu okwu. KAS S KWURU NA Ọ B YOUR EB YOURGH TO TOB TO F KWES FR F UCBUCR THEY HA B NOT B C ỌB C.
Ọ D NOGH NO Mmejọ Ebe a. Echere m na e nwere ọtụtụ njehie. Enwere mmejọ na ụmụ agbọghọ ụmụ nwanyị na akụkụ ụmụ nwoke.
O kwesiri itu ya bọọlụ? MBA. Ndi otu abuo enweghi ike ihie uzo. M ga-agbakwunye ụdọ, ihu ya mere ma kpatara mmebi ahụ na-adịghị mma site na ihe anyị na-ahụ, MGBE AH COMRM KWURU NA-EKWU EE, 'Unu ga-enweta.' MA HA B CH CHM .AKA.
YOU ghaghị ịma na ọ na-egwuri egwu. LMY NWAANYY ANYA Adabaghị. Ọ KWES FR F IME GI N ’N’IHI NA Ọ B A Nwata nwanyị.
BịANụ NA-enyeghị ihe a. NA-EGO ỌMA. BRBE na nwata a arụọla ọrụ n’ọrụ gị, anyị amaghị.
Ọ BR IT na Ọ bụ obere agbata obi unu nwere ike ịma ibe unu ma ọ bụkwa ezigbo mkpa ma na anaghị m ekpebi ikpebi ihe merenụ. Ọ B IFR YOU na ị bụ okenye na-awakpo. HEY, ANA-AS F EKWU nye nwoke nwoke nanị ya ka o mere ka ọ nwaa, ma ọ bụ? Ma ha abụghị ndị okenye, ha bụ ụmụaka nke ihe ahụ mere 1 ugboro nde INAMERICA MA Ọ NA-AD IN N'INLỌ ỌHUBRUB ỌH YRES EE, EE, EE, UGBU A CHM WEAKA NA-EBE A.
kona sutra nyochaa
Ọ DTR EM EMB.WRH. KWES .R.W .ỌMYM .RRRS .H.WR .R.W .HHRY .WBHR. .B .R.W .WB .R.W .WB .R.W. Ọ dị ka onye na-eche echiche bọọlụ na-agagharị na ọ maghị nke ọma.
Akụkụ m kacha amasị m bụ nnukwu enyi m bidoro na-agba ọsọ. O RUOO N’OKUO N’ILE. GA-EME ỌZỌ Ọ B YOUR YOU NA WAT NA-ECHICHE VIDIO ONLINE
A NA-Apụghị A. Ma nke ahụ abụghị ihe dị mkpa maka mba niile n'etiti nne na nna na nwata na ndị ọrụ. NT REKWU CHM CHAKA B WAS ỌD F NA ỌD SC, Ọ B NOGHTH IHE Ọ B ALLLA. KWES NORONG OUB WHATR WE Ihe anyị ga-abụ ma ọ bụ ihe mmetụta okwu anyị dị.
abamuru nke ofu bike gia
ANY J NA-ELE ANYA vidiyo wee banye. Ọ D ISGH AW Mmata, N’oge na-eche echiche otu anyị ga-esi na-achịkwa onwe anyị. MGBE LElee ihe ndị dị n'okpuru na nsogbu nhụsianya dị.
ANY WILL AGAGH AD EME IHE. MGBE M SIRI IHE IHE DI KA MERE. Anọ m n'ogige ahụ, ahụrụ m onye ọ bụla na HISBIKES ma na-agba m ịnyịnya.
M KWURU SOMLỌ KWURU, Ọ KWURU BFỌDACK, M AB NOTGH WHAT IHE, M KWERE NA M SI NA-enye ya aha njirimara na ụdị iwe iwe, Ọ KWURU NA-EGO gị, N'AGB THE BALL NERF NA Ọ B AS Ọ B IF Ọ B IF Ọ B TA Ọ B AR TA TAB QTA NTOFTA NTOFTA NA PAP Ihu ya ziri ezi. Ọ na-efepụ igwe kwụ otu ebe na m dị ka OH SHIT, M nwere ezigbo ogwe aka. MA MGBE AH I M NA-AD BRAD ỌJỌỌ n'ihi na echeghị m na enwere m ohere ịkụda ya.
Achọrọ m ka m tụfuo ya ruo taa ka m na-eche. Ọ B IM IME. EBERE m enyi a.
N’AGBANYEGH,, M NA-ECHETA N’IHI NWA AH D MERE. Ọ BAC Kpọmkwem ihe m mere. Amaghị m ihe m na-eme.
Ọ ka kwesịrị iweghachi. N'EZIE.
LeBron James ọ bụ otu nde mmadụ?
Mgbe ọ dị afọ 18, LeBron James jụrụ mgbanwe mgbanwe ndụ maka $ 10 iji banye na Reebok wee laghachi ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'echi ya. LeBron ga-emesị kwuo, 'Mkpebi azụmahịa kachasị mma m meworo'. Ọ bụ ezie na ọ dị naanị afọ 18, mkpebi ahụ ga-esetịpụrụ ụkpụrụ maka azụmaahịa LeBron James n'ọdịnihu: itinye ihe ga-adịte aka karịa uru dị mkpụmkpụ.
Atụmatụ nke ga - eduga ya na pọtụfoliyo azụmaahịa nke ụfọdụ ụlọ ọrụ na - eto ngwa ngwa n'ụwa niile ma degharịa ụzọ mgbasa ozi egwuregwu si arụ ọrụ. Nke a bụ akụkọ banyere otu LeBron James si jiri ọrụ Akron, Ohio mee ihe iji zụlite akara egwuregwu kachasị ike n'egwuregwu niile. Dịka nwa akwụkwọ sekọndrị, LeBron bụ otu n'ime ndị asọmpi NBA kachasị atụ anya na akụkọ ntolite; Ndị ama ama, ndị ama ama egwuregwu, na onye nchoputa Nike Phil Knight niile bịara ịhụ egwuregwu ya.
Ọ bụghị ihe omimi maka ndị otu ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke Obodo ya hụrụ ka egwuregwu si na obere mgbatị ahụ gaa na nnukwu ogige iji nweta ihe achọrọ. N'ezie, otu egwuregwu rere na Senior Year ya na 20,000 oche Gund Arena, ụlọ nke Cleveland Cavaliers, ndị otu NBA nke steeti na-erughị 12,000 kwa egwuregwu. Site na Adidas, onye kwụrụ naanị $ 15,000 iji nye ụlọ akwụkwọ sekọndrị ngwaahịa ha, na ESPN, nke LeBron gosipụtara ndị na-ege ntị na mba na egwuregwu mbụ a na-akpọ televised na Disemba 2002, LeBron enweghị ego dịka onye na-amu amu mana maka ya LeBron nyere ya ohere mbụ iji nweta nnukwu ego n'ụdị agha akpụkpọ ụkwụ n'etiti Nike, Adidas na Reebok, o jiri ohere nke mgbasa ozi mgbasa ozi gbara ya gburugburu Mgbe ọ na-ahọrọ akara, ọ maara na anya niile dị na mkpebi azụmahịa ya na-abịanụ.
Ọ ga-eyi Nike na ogige Adidas. Ọ ga-eyi Adidas na mmemme Nike, dị ka ọ mere n'oge mbụ site na JerryMaguire 'Gosi m ego ahụ!' N'ọnọdụ LeBron, ego abụghị isi ihe na-akpata mkpebi azụmahịa ya.
LeBron nwetara onyinye dị iche na nke ọ bụla ọzọ rookie na akụkọ egwuregwu mgbe Reebok nyere ya $ 10 nde nyocha na ihe karịrị $ 100 nde na nkwa, LeBron's 'waslost for words'. Iji mee ka nke a pụta ìhè, Kobe Bryant, bụ onye meriri n'ọsọ NBA ugboro atọ, natara $ 40 nde / afọ 4 site na Nike Reebok n'otu afọ ahụ, n'adịghị ka ndị egwuregwu ndị ọzọ, LeBron ghọtara ihe: 'Achọrọ m ịme azụmahịa maka ndụ . Don't naghị eche maka nlele mbụ; ị na-eche banyere ha niile. ”Nke a bụ akara ngosi izizi nke uche azụmaahịa nke ga - eme LeBron ihe ọ bụ taa.
Ọ ga-ejedebe ịbanye afọ asaa, $ 90 nde na Nike. Ọnwụnwa ịgbaso nzọụkwụ nke. na-agba arụsị ya Michael Jordan, ọnụọgụgụ 23 ọ na-eyi na jersey ya na ụlọ akwụkwọ sekọndrị niile ma na-aga ụdị nkwekọrịta na mmekọrịta mmekọrịta na Nike n'ọdịnihu, bụ onyinye ọ na-enweghị ike ịjụ.
Ọhụụ dị ogologo oge kwụrụ ụgwọ. Na 2015, LeBron bịanyere aka na nkwekọrịta ndụ ya na Nike nke ruru ijeri $ 1. Nke mbụ ụdị n'ụdị ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme.
Mgbe ịbanye na njikọ ahụ, ahịa LeBron gara n'ihu na-eto. Coca-Cola, McDonalds, Nike - ha niile chọrọ itinye aka na LeBron ma dị njikere ịkwụ ụgwọ buru ibu. Ka ọ na-erule ngwụsị 2003, ọ bụ onye egwuregwu nke anọ kachasị elu na-atụ aro n'ụwa, naanị TigerWoods ($ 90 nde kwa afọ), Michael Schumacher ($ 50 nde) na David Beckham ($ 35) ka akwụgoro karịa n'ọhịa.
giro d italia nkebi
N'agbanyeghị nke ahụ, n'agbanyeghị akụnụba na-adịgide adịgide, ịnọdụ ala na ego abụghị ụdị LeBron. Ná ngwụsị nke oge nke abụọ ya na njikọ, LeBron weere nnukwu ihe ize ndụ azụmahịa ya ruo taa. Ọ hapụrụ onye nnọchi anya ya ka ọ gaa n'ụzọ nke aka ya wee hiwe ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ya na ndị enyi 3 si n'ụlọ.
Ọgaranya Paul, Maverick Carter, na Randy Mims. Ha kpọrọ ya LRMR (n’aha ha). N'ime ime nke a, LeBron weghaara mkpebi nke aka ya ma nye ya ohere ịkọ akụkọ ọ gosipụtara n'ihu ọha dịka ndị ọchụnta ego chere na nke a bụ echiche jọgburu onwe ya.
Mana ọ bụ rue mgbe Maverick Carter batara na Paul Wachter, nwoke mere Arnold Schwarzenegger otu n'ime ụmụ nwoke ama ama n'ụwa, ka njikọ otu ahụ guzobere. Wachter malitere na-adụ LeBron ọdụ ma gosipụta na mmekorita na-akwụghachi ụgwọ karịa, karịa ị nweta ụgwọ ego maka ntinye aka, nke mere ka itinyekwu aka na usoro mgbasa ozi ya. Ndụmọdụ a ghọrọ 'ule izizi' maka LeBron.
Ọ bụrụ na ọ chọghị iso ụlọ ọrụ ahụ rụọ ọrụ, ọ gaghị eso ha rụọ ọrụ. Mgbe emebere LeBron na Beats Electronics co-guzobere gosipụtara ya ụdị ekweisi ha ọhụụ, a rere LeBron iji nye onye otu ọ bụla otu Team USA ụzọ abụọ si na United States gaa Beijing. Mgbe ndị otu ahụ gara n'ihu kamera ndị ahụ ka ha rutere na China, mkparịta ụka akparịala: Kedu ihe igwe ekwe ntị a na-eyi? N’ebe ndị mmadụ nọ, ọ bụ mmadụ ole na ole na-adọta uche nke ejiji karịa NBA nke superstars.
LeBron nyere aka nye Beats ihe dị mkpa dị mkpa ha chọrọ. LeBron mechara bụrụ onye mmekọ na Beats wee weghaara onwe ya ihe karịrị $ 30 nde mgbe $ 3 ijeri ha rere Apple na 2014. Ihe akaebe nke ịha nha ogologo oge na-enye uru dị ukwuu karịa ịkwụ ụgwọ.
Ntinye aka a na ntinye aka bara uru mgbe LeBron, MaverickCarter na Paul Wachter zutere Fenway Sports Group (FSG), nke dị na LiverpoolFC. Site n'ọchịchọ ịgbasa ikike ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, Carter gbalịrị ire echiche ahụ na LeBron n'onwe ya bụ ụlọ ọrụ aha. FSG ga-enweta ikike ịre ahịa LeBron maka nkwekọrịta azụmahịa.
Na nloghachi, LeBron ga-enweta 2% nke ihe ọhụrụ FSG, Liverpool FC. Site na nkwekọrịta, na 2% ruru ihe ruru $ 7 nde. Dabere na atụmatụ Forbes 2019 nke ihe ịga nke ọma Liverpool na ubi ahụ, otu 2% osisi ruru ihe karịrị $ 43 nde.
Mgbe anyị sonyeere ndị Lakers na 2018, o doro anya na ebumnuche LeBron n'azụ mbugharị nwere ike ịlaghachi na nkwekọrịta ọpụpụ nke ụlọ ikpe. Ọ bụghị ihe nzuzo na LA bụ isi obodo mgbasa ozi ụwa - glitz na nkwado nke Hollywood Movie Studios na-emetụta ndị mmadụ n'ụwa niile, gụnyere LeBron. Na 2007, ya na Maverick Carter guzobere SpringHill Entertainment na ebumnuche nke imepụta 'Ndị Kachasịsị Akụrụngwa Na-akpali Mmasị, Ntụrụndụ na Ngwaahịa'.
Companylọ ọrụ ahụ enweela ihe ịga nke ọma na TV, ihe nkiri, na ọrụ ọdịyo gụnyere smash kụrụ TopBoy na mmekorita ya na Music Star, Drake, mana nnukwu ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ mgbasa ozi maka LeBron bụ ihe e kere eke Na-adịghị Akwụsị, usoro mgbasa ozi dijitalụ nke mere ka ọ na-enyere ndị na-eme egwuregwu iji kesaa ozi ha n’usoro nke ha. LeBron mụtara site na ahụmịhe ya gara aga na ọrụ telivishọn ma chọọ ka ndị na-eme egwuregwu nwee ike ikwu okwu n'enweghị mmachi na nnukwu netwọkụ egwuregwu nwere ike ịnye. Mana inye ndị na-eme egwuregwu ike abụghị naanị ihe mgbaru ọsọ LeBron gbasoro na UNINTERRUPTED.
Ikike inwe, ijikwa, ma kesaa ọdịnaya gị dị mkpa na ụwa ebe ndị ahịa na-eji oge ka ukwuu na-ekiri, na-agụ, ma ọ bụ na-ege ntị na mgbasa ozi na ekwentị ha. LeBron nwetara ikike sitere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi yiri nke ndị ntọala malitere, dị ka Players Tribune. Ndị egwuregwu a na-eji ohere ndị mgbasa ozi na ịntanetị na-enye na-erite uru site na mgbanwe nke na-ewepụ onye etiti.
Site n'echiche azụmahịa, LeBron kwụ ọtọ na nke ahụ kama ịrere ihe oyiyi ya, akụkọ ya, na olu ya - akụ ọgụgụ isi ya - nye ESPN ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma mee ka ha mepụta akwụkwọ na-eme ọtụtụ nde dollar, ọ na-ejide njikwa nke akụ ọgụgụ isi ya Inwe ya na inwetara onwe ya ego. Na 2012 ekwuputara na ihe ngbanwe nke SpaceJam kpara ike ya na LeBron dika emere kpakpando. Mana LeBron chere maka ihe nkiri ahụ ma buru ụzọ nwee mmekọrịta mmekọrịta azụmahịa na ụlọ ọrụ na-emepụta Warner Bros.
Na 2015, Akwụsịghị enweta ihe karịrị $ 16 nde na ntinye ego, nke Warner Bros na ndị mmekọ ndị ọzọ na-eduzi, na ederede ederede n'ikpeazụ kwetara na 2018. Dịka ọrụ LeBron dị ịtụnanya na ụlọ ikpe na-eru nso n'afọ ikpeazụ ya, enwere ike ịrụ ụka na ọrụ azụmahịa ya bụ ka nọ na nwata. Ajụjụ bụ gịnị na-esote? Otu otu ụbọchị nwekwara ọchịchọ ya ịga n'ihu ọrụ dị egwu nke 'LeBron James Foundation' na inye ụmụaka ikike n'obodo ya.
Mana otu ihe doro anya, ozugbo a kpọgidere ndị sneakers na egwuregwu ikpeazụ, ọ gaghị abụ oge ikpeazụ anyị ga-ahụ LeBron. Kedu ihe ị chere na-esote LeBron James? You chọrọ ịhụ na o nwere otu egwuregwu? Ọ bụrụ otú ahụ, ònye? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Kedu ego netwọ LeBron bara?
Dịka ederede a,Lebron James'ihe ruru nde $ 500. O nwere otutu ulo oru ndi, tinyere ego ya na NBA na nkwenye ya, ga adighi nma okpukpu abuo.Jamesna-eme $ 40 nde kwa afọ site na NBA.Ọnwa Ise 13, 2021
lebron james isi iyi nke akụ na ụgbụ bara uru lebron james bụ onye ọkpọ egwuregwu bọọlụ basketball America na onye ọchụnta ego nwere ọnụọgụ $ 500 nde dịka onye ama ama. A mụrụ Lebron James na Akron Ohio na Disemba 30, 1984, ada nwanyị Gloria Marie James 16 n'oge amụrụ ya, nna ya anthony mccelland nwere ndekọ mpụ dị ukwuu ma etinyeghị aka na ndụ ya dịka james toro ndụ na-abụkarị mgba maka ezin’ulo, dika ha na esi na ulo biri na ulo n’ime mkpuru nkpuru akron gloria, nwere nsogbu n’inwe oru kwesiri ekwesi dika ha choputara na nwa ha nwoke ga aka nma na ezi na ulo. Gloria kwere ka ya na ezinụlọ nke Frank Walker, onye nkuzi bọọlụ ntorobịa nọ na mpaghara wee mee ka James nwee basketball mgbe ọ dị afọ itoolu.
James malitere igwu egwuregwu basketball a haziri ahazi na ọkwa nke ise, emesịa kpọọ Amateur Athletic Union ma ọ bụ Aau basketball maka Shooting Star na Northeast Ohio - ndị otu ahụ nwere ihe ịga nke ọma na mpaghara na mba, nke James na ndị enyi Sean Cotton Drew Joyce III na-eduzi na willie mcgee lebron james gara st A na-eme atụmatụ ego ruru $ 500, dị ka Celebrity Net Worth kwa afọ, Lebron James na-enweta ihe ruru $ 40 na ụgwọ site na NBA na ihe dịka $ 55 nde site na nkwado, na-eme ego ya kwa afọ n'etiti June 2016 na. ruru ihe ruru $ 100 nde na 2017 Lebron nwetara $ 86 nde n'etiti June 2017 na June 2018 lebron nwetara $ 85.5 nde n'etiti June 2018 na June 2019 n'otu oge ahụ, lebron nwetara ihe ruru nde dollar 326, nke ahụ bụ $ 452 nde site na afọ iri mbụ ya dịka ọkachamara Lebron bịanyere aka na nkwekọrịta afọ abụọ maka $ 85 na ndị Lakers, na oge nkwekọrịta ahụ ga-agwụ na 2023 Lebron emeela $ 428 na ụgwọ NBA.
Lebron na-agbasa ozi azụmahịa lebron abanyela aka na mgbasa ozi na ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere Mcdonald's Microsoft State Farm Beats nke Dre Coca-Cola Dunkin Donuts Baskin Robbins Samsung Nike na ọtụtụ afọ ya dị ka ọnụ na-ekwuchitere mgbe e rere ụlọ ọrụ ahụ na Apple maka $ 3 ijeri. Lebron bịanyere aka na akwụkwọ nkwado mbụ nke Nike mgbe ọ dị afọ 18 Ọrụ ahụ kwụrụ $ 90 nde karịa afọ asaa $ 12.8 nde kwa afọ a na-enye ya nde dollar 115 kwa afọ na Disemba 2015 iji banye na reebok. lebron bịanyere aka na nkwekọrịta mgbasa ozi ndụ niile na Nike, nke nwere ike bụrụ ihe ruru otu ijeri dollar, bụ azụmahịa mbụ nke Nike nyerela ma kọọ akụkọ kachasị na akụkọ ụlọ ọrụ taa.
Lebron na-enweta $ 20 nde kwa afọ site na Nike na ụgwọ ọnwa na ụgwọ eze maka akara aka akpụkpọ ụkwụ ya, Lebrons ezigbo ala na ntinye ego mgbe Miami Heat James bi na aki oyibo ebe ọ leghaara ụlọ $ 9 nde atọ dị na November 2015 zụtara na Biscayne Bay. James zụtara ụlọ obibi 9,350 square n'ụsọ oké osimiri n'ụsọ oké osimiri n'ụsọ oké osimiri na brentwood los angeles maka ihe dịka $ 21 nde n'oge ahụ ọ bụ ọnụahịa kachasị elu a kwụrụ maka ụlọ agbata obi na November 2017, lebron bụ $ 23 nde maka Anotherlọ ọzọ enyere na brentwood na ohio Mpaghara Cleveland dị na Bath Townhouse houselọ ahụ Lebron nwere omenaala wuru bụ nke t. ọnụ ahịa $ 9.5 nde ohio tax ikike nwere ngụkọta nke ụlọ 20 na 30,000 square ụkwụ ọ zụtara ala azụ na 2003 mgbe ọ bụ 18 ọhụrụ mgbe isonyere nba spring ugwu ntụrụndụ lebron na ya azụmahịa ibe maverick carter bụ ngalaba-guzobere a ụlọ ọrụ mmepụta akpọrọ Spring Hill Entertainment nke na-ewepụta ihe nkiri, akwụkwọ akụkọ na ihe nkiri onyonyo na-enwu ọkụ ụlọ ọrụ Pizza na 2012 Lebron kpebiri itinye ego na mmalite Pizza akpọrọ ọkụ pizza mgbe ọ bịanyere aka na mddonald na 2017.
Lebron gbadara $ 15 nde ndọtị na-enye site na mcdonald's iji banye na Pizza na-enwu ọkụ, nwere ma ọ dịkarịa ala 21 friza pizza franchises kemgbe mmalite ahụ, na ụlọ ọrụ ahụ bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọ growingụ theụ na-eto ngwa ngwa oge niile, osisi Lebron na ọnụahịa kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ $ 40 nde Liverpool Football Club ebe ihe mgbaru ọsọ ya kachasị mma bụ inwe otu NBA, ka ọ dị ugbu a, naanị otu otu egwuregwu bọl na 2011, Lebron nwere nkwekọrịta iji nweta 2 pasent osisi na Liverpool Football Club emechi n'afọ kemgbe Emechiri azụmahịa ahụ Lebron meriri asọmpi UEFA Champions League ma baa uru $ 2 ijeri Lebron Steak kwesịrị opekata mpe $ 40 nde ndụ Lebron lebron James nwere ụmụ atọ yana Savannah Brinson, onye ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya hụrụ n'anya '' '' '' '' ”” ”” ”Ọ bụ
mmega ahụ turmeric
LeBron James na-okirikiri?
Lebron Jamesemeela nke ọma edere ịhụnanya makaịgba ígwè. Ọigwe kwụ otu ebeebugharịrị gaa egwuregwu na Miami mgbe ọ gbara bọọlụ maka Okpomọkụ, emesia ọ bidoro ụzọ inye nwa akwụkwọ ọ bụla n'ụlọ akwụkwọ I Promise, ụlọ akwụkwọ elementrị ọhụrụ o nyere aka kwado ego na obodo ya bụ Akron, Ohio, nwereigwe kwụ otu ebe.Mar 1 2019
Bikgba igwe ka mma karịa basketball?
Okporo ụzọigwe kwụ otu ebebumma karịaihe ọ bụla ma e nwere abụghị ọtụtụ carryover siịgba ígwèkabasketball.Cygba ígwèọ na-adịkarị ala, ogologo oge, mgbebasketballna-agụnyekarị ọtụtụỌzọịgba ọsọ na mkpụmkpụ ike.
Bikgba ígwè dị mma maka ndị egwuregwu?
Cygba ígwènwere ike inye ntachi obi na ọsọonye na-eme egwuregwuikike dị ukwuu, ya bụ site n'itinye aka na mbenata mmerụ na nrụzigharị. N'ihe banyere ịrụ ọrụ ọ nwere ike, na njọ, nye aka na ịnọgide na-enwe ọkwa ndị na -agba ọsọ igwe'ntachi obi (nyere ngwa kwesịrị ekwesị).
Olee otú ọgaranya bụ Stephen Curry?
Dị ka Net NetWorth,Steph Currybukwesịrịihe ruru $ 150 nde. O jirila ọrụ NBA ya niile rụọ ọrụ na ndị Golden State Warriors kemgbe 2009 wee nyere aka aha atọ NBA egwuregwu.Ọnwa Ise 19, 2021
Nye bụ onye egwuregwu kachasị baa ọgaranya?
Conor McGregor, bụ onye a ma ama na-eme egwuregwu, bụ onye a na-akwụ ụgwọ kachasị elu n'ụwaonye na-eme egwuregwuna 2020, na-eri ihe ruru $ 180 nde ($ A233m) na ego ha nwetara site na azụmaahịa azụmahịa, akụkọ Forbes gosipụtara na Wednesde.Ọnwa Ise 13, 2021
LeBron nwere ụgbọelu?
Ọtụtụ ndị egwuregwu kachasị elunweenke hanwenkeonweugboelu, na ha na-aga njem ebe ọ bụla ha chọrọ mgbe ọ bụla ha chọrọ. Ma n'ezie,LebronJames bụ otu n’ime ha. Igwe kpakpando Los Angeles Lakers nwetara Gulfstream G280, ọnụ ahịa ya dịkwa ihe dị ka nde dollar 22.Ọnwa Ise 16, 2021
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe LeBron James na-agba?
LeBron James nwere ihe edere ederede nke ọma na ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ gbaara ịnyịnya ígwè na-aga egwuregwu na Miami mgbe ọ na-egwuri egwu maka Okpomọkụ, emesia ọ malitere usoro iji nye ụmụ akwụkwọ ọ bụla nọ n'ụlọ akwụkwọ I Promise, ụlọ akwụkwọ elementrị ọhụrụ ọ nyeere aka iji ego na obodo ya nke Akron, Ohio. Ya mere, anyị maara na Eze ahụ nwere mmasị ịnya ịnyịnya.
Afọ ole ka LeBron James dị na NBA?
LeBron James. Nike.com Kemgbe ọ banyere otu egwuregwu mgbe ọ dị afọ 18, njikọta ọsọ ọsọ na ike LeBron James enyerela aka bulie ya elu nke egwuregwu ahụ.
Kedu ụdị Akpụkpọ ụkwụ LeBron James Wear?
LeBron James. Nike.com LeBron James na-akwụsị ihe ọ bụla ka ọ bụrụ nke kachasị mma, na usoro ọrụ akụkọ ọdịnala ya dugara ya n'ịdị ukwuu. Lelee akpụkpọ ụkwụ Nike LeBron kachasị ọhụrụ, gia na uwe. LeBron James na-akwụsị ihe ọ bụla ka ọ bụrụ ihe kachasị mma, na usoro ọrụ akụkọ ifo ya edugawo ya n'ịdị ukwuu. Lelee akpụkpọ ụkwụ Nike LeBron kachasị ọhụrụ, gia na uwe.